Ny mpamorona ny PUBG dia mitory an'i Apple sy Google noho ny tsy fanesorana ny Free Fire amin'ny fivarotany | iPhone News
Ny mpamorona PUBG dia mitory an'i Apple sy Google noho ny tsy nanaisotra Free Fire tao amin'ny fivarotany
PUBG no lohatenin'ny ady royale voalohany nalaza eran'izao tontolo izao ity karazana ity, na dia H1Z1 aza no voalohany nanomboka nampiasa azy. Nanomboka teo, lalao maro hafa no nanaraka toa an'i Fortnite, Apex, Call of Duty: Warzone...
PUBG developer Krafton Inc avy any Korea Atsimo sy PUBG Santa Monica dia nametraka a Fitarainana momba an'i Apple sy Google noho ny minia tsy miraharaha ireo klones samihafa hita ao amin'ny magazay roa, satria Free Fire, avy amin'ny mpamorona Garena Online, izay ifantohan'ity fitoriana ity.
Araka ny azo vakiana ao amin'ny fitoriana, Krafton Inc dia tsy maniry ny hanesorana ny lalao amin'ny fivarotana Apple sy Google, fa koa, mitaky onitra ara-bola. Mangataka ihany koa izy ireo fa, ankoatra ny fanesorana ny anaram-boninahitra Free Fire, dia esorina ihany koa ny dikan-teny hafa misy ny lohateny Free Fire Max.
Nilaza ny Reuters fa mampiasa maro ny Free Fire lafiny voaaro amin'ny PUBGtoy ny firafitry ny lalao, zavatra, fitaovana ary toerana.
Ao anatin'io fitoriana io ihany, ary misy fiantraikany amin'ny Google, dia mitaky izany koa izy ireo nesorina tao amin'ny YouTube ny horonan-tsary rehetra amin'ity lohateny ity miaraka amin'ireo tantara an-tsehatra mivantana mifototra amin'ny lalao.
Krafton sy PUBG dia milaza fa an-jatony tapitrisa ny dika mitovy amin'ny Free Fire nozaraina tamin'ny alàlan'ny App Store sy Google Play, izay nandany an'i Garena sasany. vola miditra mihoatra ny 100 tapitrisa dolara any Etazonia ihany mandritra ny telo volana voalohany amin'ny 2021.
Raha tadidiko tsara dia namely ny App Store ny Free Fire taoriana kelin'ny PUBG. Raha nanana fahafahana hilalao ireo anaram-boninahitra roa ireo ianao dia ho hitanao mazava tsara ny fomba Free Fire dia dika mitovy amin'ny PUBG, miaraka amin'ny sary sy feo ratsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ny mpamorona PUBG dia mitory an'i Apple sy Google noho ny tsy nanaisotra Free Fire tao amin'ny fivarotany
Apple dia mety hamoaka iPad Air nohatsaraina tsy ho ela